हिंसाविरुद्ध बोल्न थाले महिला! पुरुषलाई उल्टै प्रतिप्रश्न, ‘‘बरु तपाईं चाहीँ भन्नुहोस् कति पैसा लिनुहुन्छ ?’’
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर १९ बुधबार | सञ्चिता घिमिरे (रासस)
ललितपुर, १९ मङ्सिर । आफन्तलाई लिन बसपार्क पुग्नु भएकी शर्मिला कँडेललाई एक पुरुषले मोटसाइकलमा आएर सोधे ‘बहिनी जाने हो ? कति पैसा लिन्छौ ?’
उहाँलाई झनक्क रीस उठ्यो र ती पुरुषलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ‘‘बरु तपाईं चाहीँ भन्नुहोस् कति पैसा लिनुहुन्छ ?’’ ती पुरुष बोलेनन् र सरासर आफ्नो बाटो लागे । गाउँदेखि काठमाडौँसम्म अनि आफन्तदेखि नचिनेकासम्मको हिंसा उहाँले धेरै सहनुभयो ।
अहिले भने उहाँ हिंसाको प्रतिवाद गर्न थाल्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हिंसा गर्नेलाई चुप लाग्दा फेरि पनि आफैँलाई वा अरुलाई हिंसा गर्छ तर हामीले प्रतिवाद ग¥यौँ फेरि उसले हिम्मत गर्दैन ।”
बाल्यकालदेखि नै हिंसा सहँदै आएका महिला खुलेर हिंसाको विरोध गर्न थालेका छन् । हिंसा सहँदा पटक÷पटक दोहोरिने भए पनि हिंसाको विरुद्ध आवाज उठाउँदा हिंसा अन्त्य हुने पीडित बताउँछन् ।
घर परिवारमा महिलाले बोल्नु हुँदैन सबै कुरा सहनुपर्छ भनेर सिकाएकै कारण पीडा भोगेको भन्दै उनीहरुले अहिले भने हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका हुन ।
लोकदोहोरी गायिकासमेत रहेकी कँडेलको इच्छा नहुँदा नहुँदै सात कक्षामा पढिरहँदा विवाह भयो । विवाहपछि उहाँले कहिले दाइजोको निहुँमा त कहिले छोरा नपाएको भन्दै पटक÷पटक हिंसा सहनुप¥यो ।
गर्भवती हुँदा समेत श्रीमान्ले प्रत्येक रात जबरजस्ती गर्दासमेत उहाँले माइतीको इज्जत राख्न भन्दै आवाज उठाउन सक्नुभएन ।
शर्मिला जस्तै ललितपुरकी शशीकला सुवेदीले पनि कहिले परिवारकै सदस्य त कहिले आफन्त र कहिले छिमेकीबाट हिंसा भोग्नुपरेको थियो ।
दिदीहरुको १३ वर्षमा बिहे भएपछि उहाँको पनि चाँडै बिहे गरिदिने परिवारको इच्छा थियो । उहाँले भने पढाइ पूरा गर्ने इच्छा राख्नुभयो । प्रवेशिकापछि मामाघरमा बसेर पढ्दा उहाँमाथि मामाकै कुदृष्टि प¥यो । विद्यालय पढाउँदा पढाउँदै उहाँले ट्युसन पढाउन थाल्नुभयो ।